Ọ bụchaghị Dental Zirconia Ceramic Discs bụ Otu na China Manufacturing Processing? Gịnị na-eme ka ngwaahịa gị dị iche? -News-VSmile Co., ltd
Ọ bụchaghị Dental Zirconia Ceramic Disks bụ otu na nhazi China Manufacturing? Kedu ihe na-eme ka ngwaahịa gị dị iche?
Oge: 2021-04-12 ikwu:48
Anyị na-enweta ajụjụ ndị a oge niile site na nyocha ụlọ nyocha maka Vsmile'zirconia ngwaahịa, na azịza ya nanị bụ "mba- niile zirconia discs abụghị otu na niile." Enwere esemokwu dị iche na diski, dịka ike na ntụgharị nke ọtụtụ labs na-elekwasị anya naanị, mana enwekwara ọtụtụ esemokwu nke na-esite n'usoro imepụta diski.
ọtụtụ ihe na-eme diski dị iche iche:
Ọcha / mmetọ - Ọ bụrụ na diski e mere na adịghị ọcha gburugburu ebe obibi ị gaghị enwe ike ịhụ ya ruo mgbe mweghachi ahụ mere ；
Ike Mgbanwe - Ọ bụrụ na njupụta nke diski zirconia abụghị otu, ọ ga-emetụta njirimara anụ ahụ ikpeazụ;
Njupụta / nkwụsịtụ - Ọ bụrụ na diski ahụ enweghị njupụta edo mgbe ahụ, mgbe ọ na-agbapụ ya, mweghachi ahụ nwere ike ịgba ；
Ọkpụrụkpụ Ime Otu - Ọ bụ ezie na nke a abụghị ihe a na-ahụkarị, ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi ihe ụfọdụ diski ahụ enweghị ọkpụrụkpụ edo, ị nwere ike ịnwe ịmebi ngwaọrụ ịcha n'oge usoro milling.;
Njirimara igwe - Ọ bụrụ na a na-akụ diski zirconia, ha nwere ike ịdị nro. Ọ bụrụ na overfipụta diski ndị ahụ, ha nwere ike ịdị nkpa. Nke a nwere ike imetụta ịcha ọsọ ma nwee ike ibute chipping;
Agba na translucency - Ọ bụrụ na ndị discs na-adịghị pre-sintered n'ụzọ ziri ezi & anọgide mgbe ụfọdụ ụfọdụ agba? Do na-eme na-acha akwụkwọ ndụ na steeti nwere ike furu efu. A diski nke dị oke oke agaghị echekwa agba ya nwere ike ọ gaghị enye chroma zuru ezu.
Ihe na-eme ka diski zirconia ceremic discs anyị karịa ọtụtụ n'ime ndị asọmpi anyị bụ eziokwu na anyị na-amalite site na nke kachasị mma ahaziri ntụ ntụ, wee pịa ntụ ntụ ahụ n'ụzọ kwụ ọtọ ma were usoro ọzọ nke ịpị ihe niile ogo 360 maka ụma mma na nkwekọ na diski anyị. M na-anụkarị mkpesa si ụlọ nyocha technicians na-atụle nkụda mmụọ nke "ihe ọjọọ ogbe" nke diski na-ezigara ha site na ụlọ ọrụ ndị ọzọ zirconia. Nke a nwere ike ọ bụghị naanị na-eri ọnụ, kama ọ na-akụda mmụọ yana ọ bụghị naanị ụlọ nyocha gị, kamakwa ndị dọkịta ezé na-eche ka ikpe ha laghachi. Ebe a na Vsmile anyị na-ewere nnukwu mpako na ịme diski kachasị dị mma nke na-agbanwekwa maka udo nke uche na afọ ojuju nke ndị ahịa anyị, emere ebe a China. Inye ike site na 700Mpa rue 1350 MPa na ntụgharị si 37% -57% na-eme ka anyị zirconia mezuo ihe niile ị chọrọ, ịnagide, okpueze zuru oke, akwa mmiri, inlay, onlay, ntinye, ị nwere ike ịchọta ngwa ngwa maka ihe dị iche iche, 3D pro na prism zirconia diski na-eme ka ọ kwe gị omume jiri otu diski maka akwa nke nwere okpukpu abụọ na okpueze ihu ọma mara mma na-ewepu nyocha nke ụlọ nyocha maka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụlọ ahịa na-anakọta ájá ruo mgbe okwu zuru oke ga-abịa maka diski a kapịrị ọnụ. Enwere m obi ụtọ na m bụ onye na-akwado ngwaahịa a, amakwaara m na ụlọ nyocha gị agaghị enwe mmechuihu site na mgbanwe na Vsmile 3D kwa na Prismas Zirconia.
Biko bịakwute anyị ajụjụ ọ bụla na ngwaahịa zirconia seramiiki anyị, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ CadCam eze, anyị nọ ebe a iji nyere aka!
PREV: Zirconia Opaqueness & Shade mbipụta mgbe Sintering
OSOTE : Prism (3D multilayer zirconia block) Nhọrọ nke Artist.